उपत्यकामा घट्दै कोरोना संक्रमण, चेनब्रेक भएकै हो? « AayoMail
उपत्यकामा घट्दै कोरोना संक्रमण, चेनब्रेक भएकै हो?
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर ओरालो लाग्न थालेको छ। एक महिनादेखि उकालो लाग्दै आएको संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्न थालेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले मात्र नभई अस्पतालमा भर्ना हुन आउने बिरामीको संख्याले पनि यस्तै देखाएको छ।
निजामति कर्मचारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका बिरामी भर्ना हुन आउने क्रममा कमी आउन थालेको डा सुमनबाबु मरहठ्ठाले बताए।
‘अस्पतालमा हरेक दिन २० जना नयाँ संक्रमित भर्ना हुन आउने गरेका थिए। तर अहिले ४ देखि ५ जना आउने गरेका छन्,’ उनले भने।
अहिले उपत्यका सामान्य अवस्थातिर गइरहेको र संक्रमितमा पनि कमी आएकाले भर्ना हुन आउनेको संख्या कम भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
‘पहिले मानिसहरुलाई धेरै त्रास तथा डर थियो। शय्या र अक्सिजन अभावमा मानिसहरु अस्पताल चहार्दै हिँड्नु प¥यो। यसका कारण अस्पतालहरुले चापलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। अब संक्रमितहरुमा पनि कमी आएको र अस्पतालले व्यवस्थापन गर्न सकेका कारण पनि कम विरामी आएको हुन सक्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या कमी आउन थालेपछि यहाँ पनि उस्तै असर देखिएको हुनसक्ने उनले बताए।
सरकारले बढिरहेको कोरोनाको चेन ब्रेक गर्ने भनेरै लागू गरिएको निषेधाज्ञाले पनि कहीँ न कतै संक्रमणको कमी आएको हुनसक्ने बताउँछन् त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता रामविक्रम अधिकारी।
उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरुबाट शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक ३० देखि ४० जना विरामी आउने क्रम स्वाट्टै घटेको उनी बताउँछन्। शनिबारसम्मको तथ्याङक अनुसार दैनिक १६ जना कोरोना संक्रमित अस्पतालमा भर्ना हुन आएका छन्।
‘अस्पतालमा विरामीले सबै आईसियु तथा वार्ड भरिएका हुन्थे। शय्या अभावमा मानिसहरु कुरेर बस्नुपर्थ्याे । अब त्यस्तो समस्या छैन,’ अधिकारीले भने।
अस्पतालमा ४०० भन्दा बढी संक्रमितहरुको उपचार हुने गरेकोमा अहिले कूल १७५ संक्रमित मात्र अस्पतालमा रहेको उनले जानकारी दिए।
‘लकडाउनले चेन ब्रेक गर्दैछ। योसँगै मानिसहरु विरामी हुने डरले सुरक्षित भएका कारण पनि संक्रमणको दरमा कमी भएको हुन सक्छ,’ सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, बलम्बुमा डा. प्रविन नेपालले भने।
उपत्यकाको हकमा निषेधाज्ञाले संक्रमण कम गराउन ठूलो मद्धत गरेको छ। मानिसहरु हिँडहुल र भीडभाड कमी भएपछि संक्रमणमा कमी आएको हो।
‘कोरोना संक्रमणले केही समयमा मात्र उच्च संक्रमण गराउन सक्छ भने, यो पछि गएर कम हुँदै जाने प्राकृतिक प्रचलन पनि हुन सक्छ,’ नेपालले भने।
कोरोना परीक्षणमा कमी आएका कारण कम संक्रमित फेला परेको हुन सक्ने भए पनि लक्षण भएका र बिरामी परेका व्यक्तिहरु अस्पताल आउने उनले बताए।
त्यस्तै अहिले देशभरि पिसिआर परीक्षणभन्दा पनि बढी एन्टिजेन गर्न थालिएको छ। यसका कारण पनि लक्षण नभएका व्यक्तिको परीक्षणमा कमी आयो।
उपत्यकामा संक्रमणको दरमा कमी आए पनि बाहिर जिल्लाहरुमा कुनै कमी नआएको उनले बताए। अहिले जिल्लाहरुबाट थुप्रै मानिसहरु उपचारका लागि काठमाडौं आएका छन्।
‘उपत्यका होइन, अन्य गाँउहरुमा कोरोना फैलिरहेको छ। पहिले कम मानिसहरु सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा सोधपुछका लागि आउने गरेका थिए भने अहिले यो संख्या बढेको पाएको छु,’ नेपालले भने।
तर विरामीको चाप कम भए पनि आईसियु र भेन्टिलटरको सुविधा हालसम्म पनि पुग्ने मात्रामा राख्न नसकिएको उनी बताउँछन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने कोरोनाको दर कम भए पनि अस्पतालमा चाप कम नभएको जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक रवि शाक्यले अस्पतालमा हाल पनि उत्तिकै विरामीहरु आउने गरेका बताए।
कोरोना संक्रमण उच्च भएको समयमा हामीसँग विरामीका लागि अक्सिजन तथा शय्या अभाव हुन्थ्यो भने अहिले अक्सिजनको कमी छैन। हाल पनि आईसियु र भेन्टिलेटर खाली हुन सकेका छैनन्। यसका लागि शय्या खाली नभएसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको दैनिक संख्या
काठमाडाैं- १०६० भक्तपुर- २१५ ललितपुर- २८३
काठमाडाैं-९६९ भक्तपुर- १८१ ललितपुर- ३०६
काठमाडाैं- १६३० भक्तपुर- १२९ ललितपुर- २९८
काठमाडाैं- ८९७ भक्तपुर- १८८ ललितपुर-२९९
काठमाडाैं-७२३ भक्तपुर ७३ ललितपुर-१४१